Nezvedu - Shenzhen Fullux Lighting Technology Co, Ltd.
Shenzhen Fullux Mwenje Technology Co., Ltd.ikambani inotungamira inogadzira mwenje yeLed inovavarira kupa mutengi mhinduro yekuvhenekera kubvira pakavambwa muna 2014. "tipe simba redu rese kuponesa Nesimba nepasi rose" ibhizimusi redu bhizinesi. Neboka rehunyanzvi reR & D timu, yakasimba yemhando yekudzora sisitimu, yekufungisisa sevhisi, isu takagadzira vatengi vepasirese pasirese.
Zvinoenderana nekushandurwa kwemusika uye kudiwa, Isu tinosimudzira uye tinotarisa mwenje yekukura kwe LED kubvira 2017, takagadzira nekuvandudza dzinoverengeka zvigadzirwa zvezvirimwa zvakasiyana senge cucumber, madomasi, cannabis nezvimwe, zvinoshanda kunzvimbo dzakasiyana senge matende, midziyo, mapurazi, vakawana kuzivikanwa kubva kune vashandisi, vakagadzirisa zvakanyanya goho uye vakaderedza iwo magetsi nemubhadharo wevashandi!
Nekuvandudzwa kwemusika nevashandisi zvinodiwa, isu tinodhura ingangoita mwedzi gumi kusimudzira yedu SPF Spider LED kukura mwenje akateedzana kuve semi-otomatiki mu2020, akawana akati wandei ekugadzira patent uye ETL, FCC, IECE, CE, ROHS mvumo! Iyo yepasirose yekugadzira semi-auto inoshanduka yakatungamira kukura mwenje neDALI yekudzvanya system uye nhare WIFI yekudzora system sarudzo, Clone & veg, maruva & maruva maseru maererano nemuti wekukura nguva, zvakanyanya kudzora basa rekugadzirisa kukwirira kwechiedza uye kusimba & chakapetwa. Zvichakadaro kugona kwakasvika 3.0umol / J pane simba rakakura, zvinonyatso kukubatsira iwe kuita imwechete-yekumira kukura kubva padombo kusvika pakukohwa!
Sehunyanzvi hwe LED inokura mwenje mutengesi, hongu isu tine mukurumbira dhizaini yekutengesa online senge Amazon, Ebay, inofungidzirwa nezvechengetedzo muyero, mhedzisiro uye mutengo, isu takagadzira imwe patent dzakateedzana: yakanyanya-inodhura Seamless splice yakatungamira kukura mwenje nhevedzano, yemukati UL yakanyorwa mutyairi inopa chengetedza chengetedzo, isina musono kutsemura zvichienderana nezvinodiwa pasina maturusi, izere simba renzvimbo yekusarudzika panguva iyoyo ne dimmer, zvechokwadi yepamusoro mutengo-unoshanda pakati pemusika!
Isu tinopawo akakosha mwenje mhinduro sevhisi nyowani yepurazi chivakwa, kukwidziridza kwepurazi, zvigadzirwa gadzirisa, OEM & ODM inogamuchirwa!
"Ita kuti zvive nyore kukura uye nekuwedzera kushanda" ndiwo musimboti wedu.
"Iva wako Wepamusoro-goho Mubatsiri "ndicho chinangwa chedu.
Ticharamba tichifamba tichiunza iwe zvirinani zvigadzirwa uye sevhisi, tarisira kumberi kubatana newe munguva pfupi!